Mogadishu Journal » Puntland oo War adag kasoo saartay rabshadihii ka dhacay magaalada Muqdisho
Madaxtooyada maamulka Puntland ayaa qoraal goordhaw laga soo saaray looga hadlay dagaaladii xalay iyo saakay qeybo kamid ah magaalada Muqdisho ku dhax maray ciidamo kala taabacsan dowlada iyo Midowga Musharaxiinta.
Qoraalka Puntland ayaa lagu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in qalalaase iyo falal abuuri karo xasilooni daro dalka ka dhacaan xili la sugayo in dalka doorasho ka dhacdo sidoo kale falalkaasi qeyb ka noqdaan ciidamada qalabka sida.
”Puntland waxa ay isha ku haysay waxa ka dhacayay xalay saqdii dhexe iyo Saaka aroortii Magaalada Muqdisho, waxaa wax laga xumaado ah in iyadoo la sugaayo doorasho ka dhacda Dalka ay timaado falal abuuri kara qalalaaso iyo xasilooni daro ka aloosanta dalka oo weliba ay qayb ka noqdaan ciidamada qalabka sida ee loo diyaariyey in ay dhowraan karaamada iyo sharafta muwaadinka Soomaaliyeed.” ayaa lagu yiri Qoraalka Puntland.about:blank
Maamulka Puntland ayaa ugu baaqay dhammaan masuuliyiinta dalka in uu caqligu taliyo oo aan dhiig loo daadin kala aragti duwanaan siyaasadeed, Puntland ayaa sidoo kale ku baaqday in la ilaaliyo dimuquraadiyada curdunka ah.
”Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan masuuliyiinta dalka in uu caqligu taliyo oo aan dhiig loo daadin kala aragti duwanaan siyaasadeed iyadoo lagu xaliyi karo sifooyin kale oo ka haboon. Lana iIlaaliyo dimuqraadiyadda curdunka ah ee aynu haysano, fursadna aan loo siin ururada argagixisada in ay helaan siyaabo ay ugu soo noqdaan magaalada Muqdisho oo ay dhibaatooyin uga geystaan.” ayaa lagu yiri qoraalka Puntland kasoo baxay.
Xiisada ka aloosan magaalada Muqdisho ayaa kusoo aadeysa xili la filayo in Madaxtooyada lagu qabto shir ay isugu imaanayaan Madaxda dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkan looga hadlayaa khilaafka doorashada ka taagan.
Madaxda Jubbaland iyo Puntland oo shuruudo adag ku xiray Imaanshaha Muqdisho